Uhlu lwezinombolo zefoni laseHong-Kong | Uhlu Lwezingcingo | Database lakamuva Lokuposa
Uhla lwezinombolo zocingo lwaseHong-Kong
Database lakamuva Lokuposa » Uhla lwezinombolo zocingo lwaseHong-Kong
Izinombolo zocingo zaseHong-Kong
Uhlu lwezinombolo zocingo lwaseHong-Kong lungeze lapha uhlu lwezinombolo zeselula zabathengi abangu-700,000 ezivela eHong-Kong. Idathabhethi yakamuva ingenye yezinkampani ezihlinzeka ngezinsizakalo zefoni ezingcono kakhulu emhlabeni. Thenga uhlu lwezinombolo zefoni lwaseHong-Kong lokumaketha imininingwane yebhizinisi lakho abathengi ngqo.
Sihlanganise lapha lonke uhlu lwamuva lokungena nokungena kwefoni okuqinisekisiwe lokuthuthukisa ibhizinisi eHong-Kong. Futhi, sizama ukunikeza uhlu lwefoni oluhle kakhulu noluthembekile nawo wonke amakhasimende ethu. Siphinde sanikela ngamanani entengo ancintisana kakhulu.
Sikholelwa ekunikezeni isamba semininingwane eshibhile, esisebenzayo nesiphezulu sokweneliseka kwenombolo yeselula. Thenga uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi baseFrance bese uthola uhlu olusha lweselula olunegama lokuxhumana, ikheli,
Thenga iHlu-Kong B2C Uhlu lwefoni
Inani Lamarekhodi: 70,000
UHLEKONG ConSUMER FONI UHLU
Uhlu lwabathengi beHong-Kong luyindlela ephumelelayo yokuxhumana nabathengi futhi uthole impendulo esheshayo. Ukusebenzisa izinhla zefoni yebhizinisi eliqondiwe kuzokusiza ukukhulisa ibhizinisi lakho ngamathuba wokuthengisa angeziwe.
Idatha ethembekile ingasiza abathengi bakho ukuthi bagweme ukuchitha isikhathi nemali njengoba usebenzela ukuba nezingxoxo ezakhayo namakhasimende amasha. Izingxoxo zocingo ziyindlela enhle yokufinyelela iklayenti lakho elizayo lokumaketha umuntu noma inkampani futhi ifinyelele izinhloso zakho zokuthengisa. Ukuthengisa ngocingo, ukumaketha kwe-sms noma ukubiza kubanda kuyindlela enhle yokuthengisa imikhiqizo enjenge-e commerce, izikhungo zokushayela ucingo namanye amabhizinisi aku-inthanethi noma angaxhunyiwe ku-inthanethi.
Uhlu lwabathengi beHong-Kong olusuka eDathabheni Lokulayisha Lamanje lune-70,000 eqoqwe yedatha yokuvuselelwa yohlu lwabathengi lwezinombolo ezingaba ngama- $ 600, inkokhelo yesikhathi esithile kanye nesoftware engenzekayo engaba ifomethi yefayela le-Excel CSV.
Idathabheyili Yokugcina Yamaphepha noma i-database yakamuva.com inganikeza konke okudingayo ngohlu lwefoni yebhizinisi. Uhlu lwabathengi beHong-Kong lunedatha eyi-95% eyiqoqo eqongelelwe ngabasebenzi ukwenza amaklayenti akho okuqondakalayo afinyeleleke kalula, azothintana ngokungasebenzi futhi angathengisa kalula. Ukwenza ibhizinisi lakho linwebeke, liguquleke futhi kube yindlela enhle yokwenza ibhizinisi lakho liphumelele kakhudlwana.
Umbuzo nenombolo yefoni yaseHong-Kong